HGH ukulahlekelwa isisindo eThailand | Sebenzisa i-hormone yokukhula yabantu ukulahlekelwa ngamafutha
HGH ukulahlekelwa isisindo eThailand | Sebenzisa i-hormone yokukhula yabantu ukulahlekelwa ngamafutha eBangkok
I-hormone yokukhula (somatotropin, HGH) abaninzi abantu Thayilendi zidibaniswa neenkqubo zeentlabathi zokwakha imisipha. Indlela - i-HGH inefuthe elinamandla le-anabolic, ikhuthaza ukukhula kwemisipha, iqinisa amandla omzimba kunye nokuba ibangele impembelelo yokuhlaziywa ngokupheleleyo. Kuba la mathuba avela kumandla okunciphisa amanqamzana omzimba ngokuqhelekileyo alahlekelwa yimbonakalo, kodwa ngeze-i-hormone yokukhula ukutshisa amakhilogremu angaphezulu.
Ngokomzekeliso, unokujika kwisifundo se-University of Bangkok kwi-1998, apho abantu abadala be-24 bafumana umthamo we-2 mg - 5 mg HGH ngeenyanga ezintandathu. Ngethuba eli xesha ubunzima bomzimba babo abuzange buyeke, kodwa umlinganiselo phakathi kwesisundu kunye neethambo eziye zatshintshile kakhulu - ngomyinge, umntu ngamnye uthatha iiplani ze-5.5 ze-muscle kwaye, ngokubalulekayo, walahla i-5.7 kg yeoli. Kwaye ilahleko ekhulu kunayo yonke ilahlekelwe yindumbu. Akumangalisi ukuba ixesha lokugqibela liyizidakamizwa njengeGenotropin, i-jintropin kunye ne-ansomone kunye nezinye i-hormone yokukhula kwezidakamizwa ezikhethiweyo kubadlali abaninzi abafuna ukunciphisa ipesenti yemizimba yomzimba.
I-hormone yokukhula yokulahleka kwesisindo?
Inxalenye enkulu yeendawo ezivuthayo eziqhumisayo zeHGH zidibaniswa nomphumo wayo kwi-metabolism. I-Metabolism, yaziwa ngokucacileyo ukuba phantse nayiphi na iseli emzimbeni womntu inikwe amandla ngama-acid acids okanye i-glucose. Yaye ukuba inani le-glucose egazini lilawulwa yi-anabolic insulin hormone, inani lamafutha e-acids kwi-hormone yokukhula. Injongo ofuna ukuyifumana ukulahlekelwa isisindo kunye nokunciphisa amanqatha, kukunyanzelisa iiseli ukuba zidle amafutha amaninzi kune-glucose. I-insulini ayiyiyo impendulo - igcina i-glucose kwinqanaba eliqhelekileyo kwaye lilondoloze kwiindawo. Kwimeko nayiphi na into, kubangela ukuba iiseli zidle i-glucose, zingabi ziqhamo, kunye nokwandisa ukubunjwa kwama-acid acids esibindi.
Kodwa i-HGH yinto enokumchasana nayo, izama ukunciphisa ukusetyenziswa kwe-cell glucose kwaye imyanzele ukuba idle ama-acid acids. Ukwenza oku, kuzinyathelo kwi-membrane yeeseli ezinamafutha kwaye isebenza njengeendlela zothutho ezithatha kwi-acid acids, ezithatha igazi, kwaye zinike i-oxygen. Ngamanye amagama, iguqula inkqubo ye-lipolysis, okt ukunciphisa inani lamatye e-fat. Kwaye ngokubaluleke kakhulu, akukho iifom ze-HGH eziphathekayo aziyi kuyeka ukuqulethelwa kwayo kwaye zingatshatyalaliswa. Kodwa ukuba iiseli zomzimba ziza kufuna ama-acids amaninzi, kunye nokwahlukana kweeseli ezinamafutha phantsi kwezenzo zokukhula kwehommone yokukhula, kwaye ukuhlanganiswa kwamafutha ukusuka kwiipasiti kuya kwanda, okuya kubangela ukulahleka kwesisindo. Ukuba ufuna ngokwenene ukufingqa, umzimba uqala ukutya amanqatha ayo. Kwaye, okokuqala, kuqala, udinga inani elaneleyo lokukhula kwehomoni.
Inkambo yokukhula kwehomoni yokulahleka kwesisindo eBangkok
Kukho iindidi ezininzi ze-hormone yokukhula. Ngamnye kubo ujolise kwiinjongo ezahlukeneyo kwaye kulungile phambi kokuzisa omnye wabo ukuba adibane nodokotela eThailand. Okanye, ubuncinci, ukuqinisekisa ukuba ukulahlekelwa isisindo akukho iingxaki nge-hormone ye-thyroid kunye nama-hormone wesondo, ngaphandle koko iziphumo ezilindelekileyo ze-HGH azibonakali nje.
Inkambo yeklasi yeHGH yokulahlekelwa isisindo kwaye iphumelele ukuxhaswa kwemisipha iqala ngeentsholongwane ezingaphantsi kwee-2 zeeyunithi zansuku zonke. Ukuba ababonisi iziphumo zecala (ngezantsi), ngeveki yesibini unako ukwandisa umthamo kwiiyunithi ze-5, kodwa kungekho-ubude obude emzimbeni wamanani amakhulu okukhula kwehomoni kuya kubakho ukuba i-pancreas uzama ukulinganisa yonke imali efunekayo ngenxa yemali ye-insulin yenziwa ngokugqithiseleyo.
Qaphela: ngamanye amaxesha unconywa ukuba uncede ama-pancreas kule nto ngokwenza i-insulin injections eyongezelelweyo. Kodwa kubalulekile kwizicwangciso ukusetyenziswa kwe-hormone yokukhula kwimilinganiselo ephezulu, ngaphezu kweeyunithi ze-5 ngosuku.
Ukujoba i-hormone yokukhula xa emzimbeni kudala izimo ezintle kakhulu, oko kukuthi, ngeshukela egazini legazi. Ixesha elide ngaphambi kokutya (ixesha elifanelekileyo kwisisu esingenalutho ekuseni) nangethuba okanye emva kokuzivocavoca ngamandla, xa iswekile idliwe kwimisebenzi yomzimba. Ukunconywa kwangaphakathi, nangona kukho iingxelo ezintle malunga nokufakwa kwe-HGH intramuscularly. Ngokuqhelekileyo ukujoba esiswini, oku kunceda ukutshisa ukutshisa amafutha kule ndawo.
Ngexesha lekhosi ukuphucula umphumo we-HGH isidingo sokungena kwi-regime yokuqeqeshwa kwezemidlalo, ngokuyinhloko kumandla, ii-2-3 ngamaxesha ngeveki. Ukuqeqeshwa kwamandla esiqhelo kufuneka kuhlaziywe i-aerobic. Ukuze uncede i-hormone yokukhula ishintshe umzimba kwi-metabolism ye-fat, ungangena ukutya okunomsocoko we-carbohydrates. Ngokubanzi, nangona kukho isincomo sokunamathela kwi-calorie yokutya (oko kukutya kunye nokuchitheka malunga nomlinganiselo ofanayo weekhalori), kwanekethe yesibonelelo samandla kunye neekhalori ezingaphezulu kunokuvelisa i-fat burning desired.
Ngethuba lekhosi yokulahlekelwa kwesisindo esincinci kunconywa ukusela kunye nokulahlekelwa kwesinye isisindo - i-hormone yokukhula cishe ayifani nxamnye nayo. Ingakumbi kakuhle i-hormone ye-thyroid, isib. I-thyroxine (i-100-150 μg imihla ngemihla) okanye i-triiodothyronine (i-25 μg imihla ngemihla). Akunjalo nje kuphela amafutha atshisa ngokwabo, kodwa nefuthe elihle kwi-thyroid gland. Kwaye ekuhambeni kwe-hormone yokukhula uyayidinga - i-HGH inqanda umsebenzi wayo kwaye inokukhokelela ekunyuseni kwayo, ukuze i-hormone ye-thyroid ngeli xesha liza kunceda ukunciphisa ukubonakaliswa kwemiphumo emibi.
I-ECA kunye nemvelaphi ye-clenbuterol kwi-hormone yokukhula iphinda ikhulise imiphumo yakho evuthayo, nangona kunjalo, ukongeza ingozi yemiphumo yazo.
Imiphumo emibi yeHGH
Enyanisweni, iHGH iyimvelo yomzimba womntu. Umzekelo, xa uneminyaka yobudala, umthamo "wokubakho" wabantu uncitshisiwe, ukwenzela ukuba ukubuyisela ukufumana i-HGH evela ngaphandle kubonakala kungenakonakalisa ingozi, nangona kunjalo xa ingagxothwanga i-hormone emzimbeni. Le yimiphumo emibi ye-HGH. Ngokuqhelekileyo kuthelekiswa ne-steroids (isiphumo sinjalo, kwaye sisebenzisa malunga namaqela afanayo abantu), kodwa ayichaphazeli ukuveliswa kwama-hormone wesini, kwaye ngenxa yendlela eyahlukileyo yezenzo ineemiphumo embi kakhulu. Kwakhona emva kokuhamba kwe-hormone yokukhula ayimfuneko ukuba unyango lwe-post-cycle, luchaze ngokukhuseleko lwakhe.
EThailand kukho inkolelo yokuba ukusetyenziswa kwe-hormone yokukhula yokulahleka kwesisindo kubangela ukwanda kweendlebe, impumlo, izihlunu, ulwimi, i-cartilage, amathambo (kunye nokubonakala kwezinto ezimbi kwiindawo zamalungu angamalungu), intliziyo kunye nezinye izitho zangaphakathi (kumzekelo owanikeziwe "abaqeshisi bomzimba abakhulelweyo" ngabadlali bezemidlalo abaye bakhula izidumbu kwaye ngoku baxhamla ngesisu). Konke oku kunokwenzeka, kodwa kuphela xa usebenzisa kakubi isibisi ngokubaluleka okungaphezulu kwamayeza aphakanyisiweyo. Uhlobo oluqhelekileyo lweHGH lokusila ukulahleka okufanayo.
I-Impact ye-HGH - carpal tunnel syndrome, ebonakalayo yintlupheko yemilenze. Kodwa inxulumene nokunyanzeliswa kwamathambo kwiphoniphery, kwandiswe imisipha, ngoko isantya sokulahlekelwa kwesisindo sinomngcipheko omncinci wesifo.
Impembelelo embi kwi-pancreas ne-grey gland, njengoko kuchazwe ngasentla. I-prescription - insulin kunye ne-hormone ye-thyroid, ngokulandelanayo. Emva kokuyeka ukunyuka komsebenzi we-hormone, izilonda zilula.
Impembelelo yecala eliqhelekileyo yanda kwenycinezelo, enokuthintela okanye ukunciphisa ama-HGH, okanye amayeza anciphisa uxinzelelo lwegazi.
Kuphi ukuthenga i-hormone yokukhula eThailand?
Ukuthenga ihomoni ye-hormone mhlawumbi ibaluleke kakhulu kwisigaba sayo. Inyaniso kukuba abaninzi be-dieters bathenga i-HGH kubathengisi "ngezandla" okanye kwiiwebhusayithi eziphazamisayo. Kodwa i-75% yesilwanyana eThailand i-fake ephukile. Kwaye kwanokuba ubomi benene abahlobo abathengile bangasebenzi ngenxa yokuba loo nto ayigcinwe ngokungalunganga - i-HGH kufuneka ihlale efrijini, ikwandisa ubomi bayo.
Esinye isigqibo kukuthenga i-hormone yokukhula kuphela ikhemisi. Liyilisi elinqatshelwe, kodwa kuphela kwimidlalo (ukudibanisa). Thenga i-hormone yokukhula yokulahleka kwesisindo ongayifumana ngokusemthethweni eBangkok. Amachiza aqinisekisiweyo HGH "Genotropin","Ansomone"kunye ne" Jintropin. "Konke kwaye" ethandekayo ezine "," i-Tops "kunye ne" Norditropin "yi-100% yefake. eqhotyoshelwe ngabavelisi ukulwa nokukhohlisa.